မြင့်မြတ်နဲ့ …ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ရမှာမို့…. ပျော်နေတဲ့ မိုးအောင်ရင် – ရှအေလငျး
မြင့်မြတ်နဲ့ …ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ရမှာမို့…. ပျော်နေတဲ့ မိုးအောင်ရင်
မိုးအောင် ရင်ကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့လာပါပြီ။ ထောင်ကနေ ပြန်လွတ်လာပြီးနောက် မြင့်မြတ်နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ပြင်ဆင်လို့နေပါတယ်။
သ ရု ပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်က အနုပညာလောကထဲ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မြင့်မြတ်နဲ့အတူ ရိုက်ကူးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ ပြန်ရိုက်ရမှာမို့ ပျော်မိတယ်လို့ မိုးအောင်ရင်က ပြောပါတယ်။
“ကျွ န်တော်နဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့က အစောကတည်းက သူငယ်ချင်း အပြင်မှာလည်း ခင်တယ်။ တခြားသူထက်စာရင် မြင့်မြတ်နဲ့ အခုလို ပြန်ရိုက်ရတော့ ကျွန်တော်ပျော်တာပေ့ါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း တချို့အရာတွေမှာ အားငယ်တာရှိတယ်။ အဆင်ပြေပ့ါမလား လုပ်နိုင်ပ့ါမလားဆိုပြီး တွေးနေတာ ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်ကို ဖေးမမယ်ထင်ပါတယ်။ ဖေးမပေးပါလို့လည်း ဒီကနေ ပြောချင်ပါတယ်” လို့ ဇူလိုင်(၆) ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့”ချာလီဘ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအထူးပွဲမှာ ပြောခဲ့တာပါ။
Photo : မြင့်မြတ်
နှ စ်တွေ အတော်ကြာမှ ပြန်ရိုက်ရမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် ပြင်ဆင်မှု အပိုင်းကိုလည်း ယခုလို ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
“ကျွန်တော်အထဲမှာ အချိန်သုံးနှစ်တောင် ယူခဲ့ရတယ်။ အဲဒီသုံးနှစ်အတွက်ကြိုးစားမယ်လို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ပရိသတ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်အများကြီး ကြိုးစားသွားပ့ါမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အပြောထက် အလုပ်နဲ့ပဲ သက်သေပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော့် အိုက်တင်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ချင်တာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်”လို့ သူက ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Photo : မိုးအောင်ရင်
ထောင်ကနေ ပြန်ထွက်လာပြီးနောက် ဗီဒီယိုဈေးကွက် ပျက်သွားတဲ့အပေါ်ကိုလည်း စိတ်မကောင်းဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“ထောင်က ပြန်ထွက်လာတော့ ဘာတွေ မရှိတော့ဘူးလဲဆိုတော့ ဗီဒီယိုခေတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ငါရော ရိုက်လို့ရပ့ါမလားပေ့ါနော်။ ရုပ်ရှင်တွေပဲ ဖြစ်နေတော့ င့ါကိုရောခေါ်ပြီး ရိုက်ပါ့မလားဆိုပြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ပရိုဂျူဆာက ကျွန်တော့်ကို အခုလို ခေါ်ပြီး ရိုက်တဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ မိုးအောင်ရင် ဆိုပါတယ်။
မိုးအောင်ရင်ဟာ မေလ ၇ ရက်နေ့မှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ အကျဉ်းထောင်ကနေ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က မူးယစ်ဆေးဝါး လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ သုံးစွဲမှု တို့အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်းက အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် ကျခံခဲ့ရပါတယ်။
မိုးအောင်ရင်ကိုတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ တီဗီကြော်ငြာတွေကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အဆိုတော် အောင်ရင်ရဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုံးချိုချို၊ သဘောကောင်းလွန်းသူ၊ ပေးလာတဲ့ ကာရိုက်တာအပေါ် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို ဒီနေ့ အထိ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသားချောတစ်ယောက်ပါ။
မိုးအောငျရငျကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ပွနျလညျဝငျရောကျလို့လာပါပွီ။ ထောငျကနေ ပွနျလှတျလာပွီးနောကျ မွငျ့မွတျနဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး ရိုကျကူးဖို့အတှကျ ပွငျဆငျလို့နပေါတယျ။
သရုပျဆောငျ မိုးအောငျရငျက အနုပညာလောကထဲ ပွနျလညျဝငျရောကျလာပွီဖွဈပွီး ပထမဆုံး ရုပျရှငျဇာတျကားကို မွငျ့မွတျနဲ့အတူ ရိုကျကူးသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ရုပျရှငျဇာတျကားကို သူငယျခငျြးနဲ့အတူတူ ပွနျရိုကျရမှာမို့ ပြျောမိတယျလို့ မိုးအောငျရငျက ပွောပါတယျ။
“ကြှနျတျောနဲ့ မွငျ့မွတျနဲ့က အစောကတညျးက သူငယျခငျြး အပွငျမှာလညျး ခငျတယျ။ တခွားသူထကျစာရငျ မွငျ့မွတျနဲ့ အခုလို ပွနျရိုကျရတော့ ကြှနျတျောပြျောတာပေ့ါ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး တခြို့အရာတှမှော အားငယျတာရှိတယျ။ အဆငျပွပေ့ါမလား လုပျနိုငျပ့ါမလားဆိုပွီး တှေးနတော ရှိတယျ။ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြးက ကြှနျတေျာ့ကို ဖေးမမယျထငျပါတယျ။ ဖေးမပေးပါလို့လညျး ဒီကနေ ပွောခငျြပါတယျ” လို့ ဇူလိုငျ(၆) ရကျနကေ့ ပွုလုပျတဲ့”ခြာလီဘ” ရုပျရှငျဇာတျကားအထူးပှဲမှာ ပွောခဲ့တာပါ။
Photo : မွငျ့မွတျ
နှဈတှေ အတျောကွာမှ ပွနျရိုကျရမယျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးအတှကျ ပွငျဆငျမှု အပိုငျးကိုလညျး ယခုလို ပွောပွခဲ့ပါသေးတယျ။
“ကြှနျတျောအထဲမှာ အခြိနျသုံးနှဈတောငျ ယူခဲ့ရတယျ။ အဲဒီသုံးနှဈအတှကျကွိုးစားမယျလို့ ကြှနျတျောဆုံးဖွတျထားတယျ။ ပရိသတျတှကေိုလညျး ကြှနျတျောအမြားကွီး ကွိုးစားသှားပ့ါမယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ အပွောထကျ အလုပျနဲ့ပဲ သကျသပွေခငျြပါတယျ။ကြှနျတေျာ့ အိုကျတငျပိုငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွငျခငျြတာတှလေညျး အမြားကွီး ရှိပါတယျ”လို့ သူက ဆကျလကျပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Photo : မိုးအောငျရငျ
ထောငျကနေ ပွနျထှကျလာပွီးနောကျ ဗီဒီယိုဈေးကှကျ ပကျြသှားတဲ့အပျေါကိုလညျး စိတျမကောငျးဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
“ထောငျက ပွနျထှကျလာတော့ ဘာတှေ မရှိတော့ဘူးလဲဆိုတော့ ဗီဒီယိုခတျေမရှိတော့ဘူးဆိုတာ သိလိုကျရတယျ။ ငါရော ရိုကျလို့ရပ့ါမလားပေ့ါနျော။ ရုပျရှငျတှပေဲ ဖွဈနတေော့ င့ါကိုရောချေါပွီး ရိုကျပါ့မလားဆိုပွီး ဖွဈခဲ့တယျ။ ကြှနျတေျာ့ပရိုဂြူဆာက ကြှနျတေျာ့ကို အခုလို ချေါပွီး ရိုကျတဲ့အတှကျ အရမျးကြေးဇူးတငျပါတယျ” လို့ မိုးအောငျရငျ ဆိုပါတယျ။
မိုးအောငျရငျဟာ မလေ ၇ ရကျနမှေ့ာ လှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့နဲ့ အကဉျြးထောငျကနေ ပွနျလညျ လှတျမွောကျလာခဲ့ပါတယျ။ သူ့ကိုတော့ မူးယဈဆေးဝါးမှုနဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈ သွဂုတျလ ၂၉ ရကျနကေ့ မူးယဈဆေးဝါး လကျဝယျတှရှေိ့မှုနဲ့ ပွဈဒဏျခမြှတျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ မူးယဈဆေးဝါး လကျဝယျတှရှေိ့မှုနဲ့ သုံးစှဲမှု တို့အတှကျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ အတှငျးက အလုပျနဲ့ ထောငျဒဏျ ၁၅ နှဈ ကခြံခဲ့ရပါတယျ။
“အသီးအရွက်များကို …ရက်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ခံအောင်သိမ်းနိုင်တဲ့ …လျှပ်စစ်မီးမလိုသော ရေခဲသေတ္တာ”
ငါးဖမ်းသွားရင်း ရရှိခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုကြောင့် ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့ မိသားစု
ဖိုင်နယ်ပွဲမတိုင်ခင် မြန်မာအိုင်ဒေါကပေးတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ရရှိသွားတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
သေဆုံသူတွေ များပြားလာတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ရေကြီးမှု ဗွီဒီယိုဖိုင် 😨😨
မင်းသွေးရဲ့ MTV မှာ နာရေးပုံစံရိုက်ခဲ့မိလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သားညီ
သီတင်းကျွတ်မှာ အမေ့ကို ကန်တော့ချင်တဲ့ ခံစားချက်တွေ အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့...
စုလှိုင်နှင်းသေဆုံးမှု ဟာ လူသတ်​မှုလား-လူသေမှုလား